XOG : Villa Somalia oo Maanta Bilowday Qorshe Cajiib ah oo ay isaga qafiifineyso Culeyska Xildhibaanada iyo Siyaasiyiinta.. | Allbanaadir News	XOG : Villa Somalia oo Maanta Bilowday Qorshe Cajiib ah oo ay isaga qafiifineyso Culeyska Xildhibaanada iyo Siyaasiyiinta..
XOG : Villa Somalia oo Maanta Bilowday Qorshe Cajiib ah oo ay isaga qafiifineyso Culeyska Xildhibaanada iyo Siyaasiyiinta..
Dec 18, 2017 - Aragtiyood
Madaxda Dowladda Somaliya oo billihii la soo dhaafay uu culeys ka haystay dhanka Xildhibaanada iyo Siyaasiyiinta degan Magaalada Muqdisho, ayaa maanta hal tallaabo horey u qaaday, si ay isaga qafiifiyan hujuumka kaga imaanaya.
Ka dib kulan ay Madaxda Qaranka ku yeesheen Aqalka Madaxtooyada ee Villa Somalia, iyadoo laga duulayo weerarkii xalay lagu qaaday hoyga Siyaasiga C/raxmaan C/shakuur Warsame, ayaa waxay soo saareen amar la’aan inaanan shirar lagu qaban karin Magaalada Muqdisho.
Wasiirka Amniga Gudaha, Maxamed Abuukar Islow (Ducaale) oo duhurnimadii maanta shir jaraa’id ku qabtay Magaalada Muqdisho, ayaa ku dhawaaqay in shirar aanay dowladdu fasax u bixin aan lagu qaban karin magaalada.
Wasirka, ayaa tilmaamay kolka loo baahan yahay in shir lagu qabto Magaalada Muqdisho, ay tahay in lagu soo wargeliyo Wasaaradda Amniga iyo Maamulka Gobolka Banaadir, iyadoo aan fasax looga haysana aan shir lagu qaban karin Caasimadda Muqdisho.
Waxaa uu carabka ku adkeeyay inay mamnuuc tahay in dadku shir ku qabsado Magaalada Muqdisho, haddii aanay ogolaansho ka haysan Maamulka Gobolka Banaadir & Wasaaradda Amniga.
“Waan ku celinaynaa, marar badana waan ku celinay mala samayn karo, waana mamnuuc goobaha lagu shiro ama dadka ay isugu taggaan qolona shir kuma qabsan karto, iyadoo aanan fasax ka haysanin Maamulka Gobolka Banaadir iyo Wasaaradda Amniga.” Ayuu yiri Wasiirka Amniga.
Wasiirka, ayaan marnaba soo hadalqaadin kulamada ay Magaalada Muqdisho ku qabsadaan Xildhibaan iyo Siyaasiyiinta, balse hadalkiisa waxaa loo fasirtay mid iyaga ku socda.
Hadalka Wasiirka, ayay dadku ku macneeyeen mid ay dowladdu kaga hortageyso shirarka gaar gaarka ahi ee muddooyinkanba Xildhibaanada iyo Siyaasiyiinta uga soconayay magaalada, xilli la sheegay inay ku abaabulayan mooshin ka dhan ah Madaxda Dowladda.
Xeeldheere-yaasha, ayaa weerarka xalay lagu galay hoyga C/raxmaan C/shakuur Warsame ee Magaalada Muqdisho ku sifeeyay farriin adag oo ku wajahan Siyaasiyiinta dhaliisha hannaanka siyaasadeed ee Villa Somalia, isla-markaana ku sugan dhulka ay dowladdu ka arrimiso.
Hadalhaynta ugu badan ee barraha bulshada, ayaa waxaa noqday hawlgalkii qorsheysnaa ee xalay lagu soo xiray Siyaasiga C/raxmaan C/shakuur, oo hadda lagu hayo xarun ay hay’adaha amniga ku leeyihiin Magaalada Muqdisho.